2 0 1 7. RUDO, KURURAMISIRA uye KUTENDA. 2 0 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Muna 2017 pakutanga kwegore, ndinoda kutanga asati achitamburira nyaya inokosha iyi chezvinyorwa yatiri kusangana pari kwamuri mose, hama dzangu dzinodiwa nehanzvadzi Kristu uye dzinodiwa vaverengi blog, zvido vangu kufara New gore 2017.
A wose, ndinovimba Mwari anoramba kubva muedzo uye rubatsiro kunyanya kuyambuka gore rino, 2017.
Ndinonamata kuti Mwari anokupa simba kutarisana nezvinetso zvoupenyu zviri mamwe makore mashoma uye kukosha.
Mwari ngaakupe uye ugare wakasimba. Inoita kuti murege kurasikirwa zvinokosha uye akakupa uye tichiratidza zvayo rutsigiro uye rudo pamukana wose.
Dai imi garai mukati upenyu bhuku kuitira kuti varege kutsamwa kwaMwari kuti kunotangira zvishoma nezvishoma kunyika kwemakore akawanda.
Rudo, Mutemo uye Faith
Ona kuti munyaya ino Rudo, Mutemo Faith anotsigira nyaya:
2017 MASHANU POKUTANGA
Tinofanira kunyatsova tinofanira kuziva kuti Rudo, Mutemo uye Faith tiri vatatu chinokosha mararamiro echiKristu uye anogona mukutarisana Mwari kuti atiponese kana isu mhosva nokusingaperi.
Kuti tinzwisise nyaya zvinoita zvinobatsira kuti chiyeuchidzo diki pamusoro nguva tiri kurarama.
Sezvo 14 May 1948, sezvo ndamboreva kazhinji uye akaratidza vari blog, isu vakapinda Biblical nguva kusvika pakuguma kwenguva.
Nguva iyi yemubhaibheri kumugumo nguva kunoitika pamusoro chizvarwa chete.
Tine chisimbiso muEvhangeri (kunyanya Mateu 24 Link: End Pamazuva ), iro vanotaurawo kuti Jesu Kristu achaita panyama kudzokera Pasi kuguma chizvarwa ichi wokupedzisira kubata ikoko vanhu kwemakore chiuru makore asati. The Millenium .
Sezvatinogona kuona, nguva yekupedzisira iri mberi iri kutambura, akafanana marwadzo okusununguka.
1 VaTesaronika 5: 3
Nokuti munoziva pachako kuti zuva raShe richauya sembavha usiku. 3Pavanoti, Rugare nekugarika; Zvino pakarepo kuparadzwa kuchakurumidza kuvawira, sezvo kurwadziwa pamusoro mukadzi pamuviri, uye havangapunyuki. 4 Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iroro rikusvikirei sembavha ; …
Yokupedzisira marwadzo akasimba uye chinopfuurira sezvo tinogona kuona zuva nezuva.
News , (Hondo, nerunyerekupe rwehondo, kutama, ugandanga uye jihad ndivo misoro yevanhu vezvenhau vose) marwadzo vanhu , (nokuparadzwa, kuchengeteka, urombo, njodzi, hosha, mhirizhonga uye kurasikirwa tsika vava dzinongoitika chinokuvadza muupenyu) arimarwadzo upenyu hwemhuka (Dead hazvitaurwi nemamiriyoni nerimwe gore kupote nyika kubvira 2008 kusvika hove, shiri nezvimwe mhuka uye nezvipfuwo) kwaicherechedzwa, nokushaiwa tsananguro, nhau mushumo minima uye marwadzo nyika (tsunami, dzvotsvotsvo remvura, Earth inozununguka, madutu, mafashamo, moto uye madutu kungoramba zvisina kujairwa) vanogamuchirwa vakawanda sezvo matambudziko inoshamisa asi chose chakaipa.
Yakatarwa yose nokurwadziwa izvi kunyange kana vanogona kuwana mamwe tsananguro yoga, zvisinei kuumba rwose kuti zvinoshamisa uye vanotaurwa muBhaibheri somumwe zviratidzo achiparidza nokukurumidza nokuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Uye zvakadini marwadzo izvi zvose zvinopupurira kwazvo iyoyo kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu ari pedyo chaizvo.
Kunyange zvazvo kunzwisisa kwedu mugumo nguva achititadzisa kuratidza kuti rudzi urwu harungatongopfuuri Jesu Kristu asati anodzokera panyama kuna Earth vake kwemakore ane chiuru iyo inoguma makore chiuru gare gare mutongo wokupedzisira. ( The wokupedzisira mutongo zvichazoveiko womunhu. Vamwe vachange nokusingaperi pasi pomurayiro waMwari, uye vamwe nokusingaperi pasi pomutemo Lucifer).
Pasinei kuti tinoona kuti marwadzo vakava nesimba kwazvo uye chinopfuurira.
Hapana munhu anogona kunyatsotaura kuti nguva vachatitaka kudzoka mukubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu.
Tinoziva kuti Bhaibheri chizvarwa nguva wakafananidzwa kwemakore 40, asi makore 70 uye kunyange makore 80 uye 120 makore kunonyanyisa zera muupenyu Genesisi 6: 3
Zvechokwadi pasinei nezvinetso zvoupenyu uye rwakadini marwadzo, Mwari unogona kutiita kumirira kusvikira 2068 (1948 + 120 years) kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu.
Jesu Kristu akati chinhu chinokosha zvikuru, » Ini ndini Arifa naOmega, wokutanga nowokupedzisira, mavambo nomugumo » Mutsara uyu kuti inoti katatu zvimwechete zvakasiyana anoratidza chokwadi guru uye rinokosha kukosha.
Kutonga uku chaizvo kunyange kunokosha akabatana muChitsauko 24 chaMateu kunzwisisa nguva chii vachatitaka kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu.
Muchitsauko 24 chaMateu Jesu anotsanangura zvinoitika apo chizvarwa chokutanga yokuberekwa pokutangira chiKristu (ndiye wokutanga) uye chii chichaitika pakupedzisira kuchizvarwa asati adzoka. (It pachavawo vokupedzisira). Izvi zvinoreva kuti pakudzoka kwake kubva panyasha zvakakwana uye saka hapana achaponeswa norudo rwake uye somugumisiro kuti vaponeswe ruchapinda kuburikidza Act.
Muchitsauko chino 24 chaMateu, Jesu akaprofita kuparadzwa kwetemberi muJerusarema. Uye mugore manomwe kwakaitika kuparadzwa iyi temberi vaiporofita naJesu Kristu.
Ipapo tinogona kunzwisisa kuti apo Jesu anotaura vechizvarwa ichi mundima 34 yechitsauko 24 Gospel yaMateu
34 Ndinokuudzai chokwadi, rudzi urwu harungatongopfuuri, kuti izvi zvose zvaitika.
Ichi chizvarwa 70 uye saka achiziva kuti chiratidzo mugumo nguva wokutanga May 14, 1948, kudzoka kwaJesu Kristu anofanira kuva paya pane May 13, 2018.
Of kosi isina nzira taigona kutaura kuti kudzoka iri kubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu kuti 2018 zvimwe nokuda bato iri Easter musi 2 April 2018.
Hazvibviri uye kunyange yaizoputsika, asi kure vamwe nokuti ramangwana nderaMwari oga.
Sezvo munhu wose aigona kuona kubva Blog Ini nguva kunanga dzimwe nguva kuti sokuti chokuita hweBhaibheri waizopiwa kudzoka kwaShe wedu.
Kunyange zvazvo nguva Ini nangananga havana zviya adzokera kubwinya, havana zvisinei zvakarwadza Church vedu Faith dzakaoma.Zvinoshamisa muna 2015 pamwe kuzivisa Pope François kuguma September pana St. Patrick kuti Cathedral iri USA. Where zvaaitaura- pasi kutinhira kuombera kuti kurovererwa kwaJesu Kristu kwaiva kutadza kwevanhu. Link .
Chinangwa Blog ichi hachisi kuzivisa kudzoka zuva raShe wedu uye Mambo Jesu Kristu asi kuziva kuti kudzoka iyi vamwe. Hazvina zera redu.Uye pedyo maonero kwakakura zviratidzo uye kuzadzika kwouprofita hweBhaibheri akaronga kuti kuguma kwenguva.
Ndiri chete muparidzi uyo inozivisa kudzoka Ishe mumwoyo mangu uye mweya.
Chinangwa changu hachisi kutengesa pepa kunyange zvandanyora mabhuku maviri pamusoro paMwari navanhu. (Rokutanga: Muparidzi Kudzoka Mambo , wechipiri France, Civilization uye Republic vasakukurwa )
Chinangwa changu ndechokuti munhu wose anogona kugadzirira kudzoka kwaJesu Kristu kuti vaponeswe uye kuramba vakanyorwa mubhuku reupenyu uye kusvika nokukurumidza pakusingaperi naMwari uye kwete Lucifer.
Kana kubvuma hwangu kudzoka kwaJesu Kristu nokuda Easter April 2, 2018 ari kuratidza kuva zuva akasarudzwa naMwari kubvira pakusikwa kwenyika, nokuti kudzoka kwaJesu Kristu kuti atonge vanhu mumakore chiuru kuti isu paradzanisa anodudzira nezvekuguma kwenyika. Saka tine 15 mwedzi kumirira.
Izvi zvinoreva kuti izvi mwedzi gumi chichava mwedzi inokosha youpenyu.
Pashure izvi mwedzi gumi tichaponeswa kana mhosva.
Avo vachaponeswa kubudikidza RUDO
Sezvo kuenda raJesu Kristu pane makore zviuru zviviri, tiri mamiriro wenyasha.
Izvi zvinoreva kuti vaya vanobhabhatidzwa, avo vakagamuchira Jesu Kristu semuponesi, vanopfidza zvivi zvavakaita, tichikumbira ruregerero kubva kuna Mwari kuburikidza Munyengetero uye maintiennes uye kubatana pamweya musiki.
Kana vakaramba kuzvininipisa muupenyu uye nehanya kubatsira vaya zvinoda rubatsiro rwavo.
Naizvozvo hungu! Ivo ndivo vaKristu, ivo rutivi Church yaJesu Kristu uye vari anosimbiswa unoponeswa nerudo rwake. Ona nyaya yangu chaiwo:Angashinga Kutenda muna Mwari uye Jesu Kristu
Ivo vanogara Pasi muMakore Ane Chiuru.
Avo vachaponeswa noMutemo
Vakawanda vanoona euto ndivo vaya vanorarama mwero upenyu, kwete kutsvaka kuita kukuvadza vamwe, asi kungoti kurarama kusaziva rudo rwaJesu Kristu achaponeswa vamwe (chiuru kwapera makore) nokuda Act pamusoro Mwari panguva yokupedzisira kutongwa uye vose vakafa vachamutswa uye kutongwa naMwari maererano nemabasa avo.
Vaya Akaponeswa Faith
Vamwe vaKristu Akaponeswa Rudo Jesu Kristu uye vazvarwa patsva!Kureva uyo akakumbira Mwari kuti atungamirire upenyu hwavo, kuti muvadzivirire kure zvakaipa uye muedzo.
Kufambira mberi muupenyu mune Rudo rwaJesu Kristu uye zvachose uye chakakwana kuvimba Mwari, aine chokwadi, matunhu uye vanodada musoro kuti vaKristu zvikurukuru pakuguma kwenguva.
VaKristu Vose vaya vadzivirire kereke pasina mhirizhonga, dzimwe nguva vachiisa upenyu hwavo kuzivisa nokukurumidza ushe Love Pasi Pano kudzoka kwaJesu Kristu.
VaKristu ivavo vose vanopa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu nokubatsira vanoshayiwa, vanorwara, vanoshayiwa uye vaya mumudzimu kurashika.
VaKristu Vose avo vanoponeswa norudo rwaJesu Kristu uye chapupu acharopafadzwa naMwari uye Jesu Kristu.
Munguva idzi mwedzi gumi Lucifer achawana dzomusango uye akarova vanhu nesimba rake rose.
Unonzwisisa kuti muedzo achava simba uye makuru uye zvichava zvakaoma chaizvo panguva dzose kuenda mberi muupenyu uye mukutenda serenely.
Naizvozvo unofanira kunzwisisa kuti Lucifer ndiye mambo fungidziro uye kuti nguva dzose tinofanira kuongorora zviitiko nezviito kuti kwete kutisiya abatwa mumusungo.
Zvakanaka kunzwisisa kuti zvakapesana rudo handivengi nguva dzose asi dzimwe nguva rudo chairwo!
Zvakapesana hweMutemo haisi nguva dzose kusateerera, asi dzimwe nguva murairo pachayo.
Zvakapesana kutenda hakusi nguva dzose kusatendera asi kutenda pachayo.
Saka taikwanisa kutisiya anonyengedza kana takanga tisina kungwarira.
Nzwisisa kuti Mwari hakuna rudo pasina mutemo, sezvo pasina mutemo pasina rudo .
Kana Lucifer hapana rudo achiita uye hapana mutemo Murudo .
Ini zvinokukumbira kuti kufungisisa inokosha kusiyana ava Rudo uye Mutemo waMwari uye Lucifer.
Apo Faith chii chaungaita nazvo kushumira muchifunga kana uchishumira Mwari kushumira Lucifer!
In Love Mwari pane pfungwa Kukanganwira, tsitsi, kuzvininipisa uye kugoverana.
Mutemo waMwari pane pfungwa kunzwisisa, nhengo uye repair.
In Love Lucifer pasina mutemo pane pfungwa ezvakaipa uye ruchiva.
Mumutemo pasina Love Lucifer kare, nyaya udzvinyiriri uye varanda.
In kutenda pane katsamba wokuzvipira, kudzikama, rudo uye kuremekedza mutemo.
Kana kutenda anoiswa basa raMwari , saka ndiwo mufaro wakachena kuti vakwanise kushumira Mwari nokubatsira hama dzedu nehanzvadzi uye tichidzivirira chechi yedu uye kutenda kwedu.
Asi kana kuti kutenda anoiswa basa Lucifer anochinja vaya kuiita iri vadzvinyiriri chaiyo, magandanga, jihadists nezvimwe vaipi.
Nzira Mwari ndiye nhete sezvo retsono uye nzira iyi zvinopfuura chete kuburikidza naJesu Kristu.
« Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu; hapana unouya kuna baba asi nokwandiri! «
Aya mashoko aJesu Kristu ndivo chaizvo mutsekwende zvitendero zvose zvenyika.
Hapana achaponeswa kana ichi hachisi rudo rwaJesu Kristu uye kuti ichi tinofanira nechekare kubvumirana kuva muKristu nokubhabhatidzwa mumvura.
Tine gumi mwedzi kumirira kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu pana Easter April 2, 2018.
Asi Mwari oga anosarudza musi yokudzoka ichi saka zvichava zvichida pashure uye zvichida kunyange zvisati.
Zvisinei dzokera ichi ndechechokwadi uye kwava pedyo uye tinofanira kugadzirira.
Kugadzirira, tinofanira kuita zvose zvatinokwanisa kuti vapfuurire mberi muupenyu kubudikidza nesimba reMweya uye kwete kusava nesimba muviri.
Mumunyengetero kuna Mwari kuti atibatsire muzvinhu zvose nguva hwedu uye kutungamirira upenyu hwedu danho nedanho.
Kumbira Mwari mumunyengetero kuti unotikanganwira zvivi zvedu uye munatse mweya yedu.
Tichaziva muna 2017 kutambudzwa kukuru paNyika, ichi ndicho chokwadi kubvira kumugumo nguva marwadzo vari zvichienzaniswa muBhaibheri kuti marwadzo yokusununguka uye saka nerimwe gore kuguma nguva kupfuura wokupedzisira.
The hourglass kuguma kwenguva Mwari adzoka kubudikidza May 14, 1948, uye yokupedzisira paakapera nguva nezviyo vachaona kudzoka kwaJesu Kristu.
Kunyengetera zuva nezuva kuti Mwari haadi kunonoka kudzoka ichi nokuti marwadzo edu kutambura haringaperi kukura uye zvinosuruvarisa kudaro Kucharamba uye kunyange kuatsanangura!
Chengetai murazvo kutenda kwako zvakanaka yakavhenekerwa muzadze mafuta mumwoyo mako uye mumweya wenyu kuyambuka rima 2017.
Kana, sezvo ini zvakasimba kutenda kudzoka kwaShe wedu Jesu Kristu anofanira kuitwa 2018 (magumo yedzinza makore 70) Saka 2017 havazodyari chete kupfuura 2016, asi ichava zvinotyisa nokuti ichava nguva zuva rehasha dzaMwari.
Nyaya iyi inokosha zvikuru kubva nokuzivisa zvokufungidzira kudzoka kuna Pasi Ishe wemadziShe, Mambo wemadzimambo, Jesu Kristu, ndiye chete mwanakomana waMwari, ndichaita kurishandura mumitauro zvose uye ini kukoka anodiwa hama dzangu nyika kutaura kuti zvose zvenyu vokukurukura kuitira kuti vose vave ruzivo uye gadzirira mweya wake.
Beloved Hama neHanzvadzi muna Kristu Jesu imi muri zvapupu zvaJesu Kristu uye vanotsigira kutenda uye kwedu Church.
Namatira ruponeso mweya yedu, nokuti hama dzedu dzose nehanzvadzi, uye zvose shoko kweEvhangeri haana mwoyo.
Mwari vakuropafadzei uye kutungamirira upenyu hwako.